Indlu esemaphandleni kufuphi namahlathi, amachibi kunye neendlela zeMTB - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni kufuphi namahlathi, amachibi kunye neendlela zeMTB
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguAaron
Wamkelekile kwindlu esemaphandleni etofotofo eyi-40 m2 kwilali encinci esemaphandleni, kufutshane namahlathi, iinduli namachibi. Ukuba ufuna indawo yokuhlala etofotofo phakathi kwendalo yakho nentsapho yakho, le yindawo entle onokuyikhetha.
Le ndlu isemaphandleni yalungiswa ngo-2019 kwaye inazo zonke izinto ozidingayo ukuze uhlale kamnandi. Igumbi lokuhlambela elitsha, ikhitshi elitsha elidityaniswe negumbi lokuhlala kunye namagumbi okulala amabini ohlukeneyo. Izilwanyana zasekhaya azivumelekanga.
Le ndlu isemaphandleni kwilali encinci engqongwe ngamahlathi amaninzi, amachibi neenduli ezincinci. Izinto onokuzenza:
1. Ukuqhuba ibhayisekile:
Zininzi izinto onokuzenza xa uhamba ngebhayisekile kule ndawo, ingakumbi xa uhamba ngebhayisekile entabeni. Kwimizuzu nje eyi-10 ukuya kweyi-20 ukusuka kwindlu esemaphandleni uza kufumana iikhilomitha ezingapheliyo zeendlela zebhayisekile zasezintabeni ezilungiselelwe kakuhle kwiindawo ezifana neHjulsjö kunye nePerhyttan. Ngaphandle koko kukho iindlela zengca ezingapheliyo eziwela emahlathini. Sukulahleka nje ehlathini, yiza nefowuni ngeGPS ukuze uphinde ufike ekhaya.
2. Ukuloba, ukuhamba ngephenyane nokuqubha:
Kukho amachibi angamakhulu kufutshane nazo zonke iintlobo zezinto ezenziwayo. Ukuba uyakuthanda ukuloba, zama ichibi iDammsjön nje imizuzu embalwa ngemoto ukusuka kwindlu yamaplanga. Kodwa khumbula ukuba kufuneka uthenge ilayisensi ekhethekileyo yokuloba. Onke amachibi alungele ukuhamba ngephenyane. Ngaba ufuna umkhumbi? Sinalo onokuliqesha. Kukho neendawo eziliqela ezilungele ukuhlamba nokuqubha.
3. Ukunyuka intaba:
Amahlathi agcwele iindlela neendlela. Zama indlela eya kwinduli i-Erikaberget, eqala kwiimitha eziyi-50 ukusuka kwindlu esemaphandleni uze wonwabele ukubuka le ndawo. Okanye uhambe ngokuhlwa uhlaziye idolophana. Ukuba ulungele ukunyuka intaba, yiya kwindawo yokugcina indalo yaseFerla ekumgama wemizuzu eyi-15, uze uhambe kumahlathi amakhulu eminyaka anamahlathi amancinci amahle kunye neendawo ezintle ezijikelezayo.
4. Ukutyelela iidolophu ezikufutshane:
Nangona indlu esemaphandleni ikude nezixeko ezinkulu, kukho iidolophu ezincinci onokuya kuzo. Kwimizuzu eyi-20 ukuya kweyi-40 ungafikelela kwiidolophu ezine ngendlela eyahlukileyo. Enye yeedolophu ezaziwayo yiNora, eye yafumana ixabiso lezakhiwo zayo ezahlukileyo nezindala zamaplanga. Hamba-hamba kwisikwere semarike kwaye uza kuba ngathi ubuyile ngenkulungwane ye-19.
5. Ukufumana nokubuka izakhiwo ezindala:
Kukho iibhombu eziliqela ezindala ehlabathini lonke emahlathini. Eminye nje imingxunya isemhlabeni, ngoxa ezinye ziipasegi ezinzulu eziya kwiinduli.
Ebudeni beenyanga zehlobo sidla ngokuhlala kwindlu engummelwane. Ngexesha lasekwindla, ebusika nasentwasahlobo ngamanye amaxesha sihlala phesheya kwaye sisenokungabikho ngexesha lokuhlala kwakho. Sinabanye abantu abasincedayo ngezi zinto ngala maxesha, kwaye siza kukwazisa oku ngaphambi kokuba ufike.
Ebudeni beenyanga zehlobo sidla ngokuhlala kwindlu engummelwane. Ngexesha lasekwindla, ebusika nasentwasahlobo ngamanye amaxesha sihlala phesheya kwaye sisenokungabikho ngexesha lo…